Puntland Iyo Somaliland Oo Markale Dagaal Ka Dhex Qarxay. – Bogga Calamada.com
Puntland Iyo Somaliland Oo Markale Dagaal Ka Dhex Qarxay.
Wararka laga helayo deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool ee Waqooyga dalka Somalia waxey sheegayaan in saaka markale dagaal culus uu ka qarxay deegaankaasi.
Dagaalkan oo ah mid aad u xoogan waxa uu ka dhex qarxay maleeshiyaat kala taabacsan maamulada gaala raacyada Puntland iyo Somaliland oo maalmihii lasoo dhaafay isku hor fadhiyay duleedka deegaankaasi.
Maleeshiyaatka Labada maamul gobaleedyada ah ayaa isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan,waxa uu dagaalkan yimid kadib markii duleedka deegaankaasi uu soo gaaray madaxweyna ku xigeenka Puntland Cabdi Xakiim Cameey kaasi oo horkacayay maleeshiyaat fara badan oo ah kuwa Puntland.
Maleeshiyaatka maamul Gobaleedka Somaliland oo diidan in deegaanka uu gudaha u gala Cameey iyo maleeshiyaatka Puntland oo doonaya in Cameey uu gudaha u galo deegaanka ayaa halkaasi isku fara saaray oo waxaa goobta ka qarxay dagaal culus.
Dadka deegaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay si aad ah uga qaxayay deegaanka maadaama ay halkaasi isku horfadhiyeen maleeshiyaatka Labada maamul gobaleedyada oo ah maamulo u adeega ayna dhisatay dowlada Kufaarta Xabashida Itoobiya.
Maalmo ka hor dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool ayaa looga itaal roonaaday maleeshiyaatka maamulka Puntland,iyadoona maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaatka labada maamul gobaleedyada ay isku hub aruursanayeen.